Guushii Cabdi Warsame oo si weyn loogu dabaaldegay -
Guushii Cabdi Warsame oo si weyn loogu dabaaldegay
Habeenkii Axada ee taariikhda bisha November ahayd 11/19/2017 ayaa waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu qabtay munaasabad si wanaagsan loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegayay dib u doorashadii iyo guushii Cabdi Warsame.
Cabdi Warsame oo isagu kamid ah gudiga golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ayaa ka guuleystay Maxamuud Nuur iyo Faadumo Yusuf oo iyaddu mataleysay xisbiga Jamhuuriga doorashadii dhacday horaantii bishan.
Loolankan loogu jiray kursiga degmadda lixaad ee magaalada Minneapolis ayaa ahaa mid aad loo hadal hayey, olole aad u weyna ay galeen dhinacyadii iyagu u tartamayey in ay hantaan xilka kursiga gudoonka degmadda lixaad.
Haddaba munaasabada ka dhacday hoteelka Ramada ee magaalada Minneapolis habeenkii Axada ayaa loogu dabaal degayey guusha iyo dib u doorashadda ay dadweyanaha degan degmadda lixaad ay dib u doorteen, kalsooni buuxdana ku siiyeen Cabdi Warsame oo isagu kursigan soo hayey afartii sanno ee la soo dhaafay.
Munaasabaddan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah odeyaasha dhaqanka, aqoonyahano iskugu jira haween iyo rag, ganacsato, abwaano, qaar kamid ah hogaamiyeyaasha laga soo doorto gobolka Minnesota iyo waliba waxgarad kale oo dhammaantood Cabdi Warsame u muujiyey taageero balaaran.
Sidoo kale waxaa munaasabadan balaaran ee loogu dabaaldegayey guusha iyo dib u doorashadda Cabdi Warsme kala soo qayb galay Jacob Frey oo ah siyaasiga da’da yar ee loo doortay Duqa Magaalada Minneapolis iyo madax kale oo ka kala socday waaxyaha kala duwan ee maamulka Magaalada Minneapolis.
Munaasabaddan oo aan loo kala harin ayaa mari sharaftii iyo dhamaan dadkii qudbadaha kala duwan ka jeediyey ayaa Cabdi Warsame ku amaanay karti, hogaan wanaag, aqoon iyo rabitaan dhab ah oo uu rabo in uu dadkiisa iyo dhamaan dadweynaha deggan degmadda lixaad iyo guud ahaanba magaalada Minneapolis wax u qabto.
Related Items:Cabdi Warsame, Featured, Somali community, Somali Minneapolis
Meet Eden Prairie’s first Somali police officer
Dib-u-tirinta codadka degmadda lixaad oo la joojiyey iyo Cabdi Warsame oo guushii si rasmi ah loo gudoonsiiyey